I-T2 epholileyo kufutshane neToulouse enethafa kunye nembonakalo entle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguChristophe
UChristophe ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Ndikunika i-T2 yam epholileyo nesebenzayo enethafa entle. Ilungele zonke iindwendwe, kunye ne-1 ibhedi ephindwe kabini kwigumbi lokulala kunye nebhedi ye-sofa kwigumbi lokuhlala ukuze ihlalise abantu abayi-1 ukuya kwabayi-4, kubakhenkethi okanye ukuhlala kwezobuchwephesha.
Ifakwe kwi-20 km ukusuka kumbindi we-hyper we-Toulouse (i-capitol), i-10 km ukusuka kwindlela esemazantsi, kunye ne-10 km ukusuka kuhola we-A61, kufutshane nesixeko kodwa kuthe cwaka kwaye kuphumla ngombono omhle.Yiza uphumle apho!
Ngena kwaye uphume ngobuqu, nceda ucwangcise iindibano ezi-2.
Ndishiya yonke into esetyenziswayo eqhelekileyo ekhoyo, injongo kukuba indlu yam ayihlali ingenanto ngexesha lokungabikho kwam, kwaye ukuba inokunceda ngaxeshanye, ilungile.Le terrace ihlanjwa lilanga imini yonke kwaye ayihoywa. Kwanele ukuchitha ixesha lokuphumla!
Le ndawo yindawo yokuhlala, enengxolo encinci okanye akukho ngxolo, ilungele ukuphumla emva kosuku lokubona indawo okanye umsebenzi.
Ukuzisebenzela umhlaba we-petanque kwindawo yokuhlala.
Ngexesha lokurenta ndiya kufumaneka ngalo lonke ixesha ngomyalezo kunye nemizuzu engama-20 ukusuka kwigumbi lokuhlala, ngaphandle kwangexesha lam lokusebenza, kungenjalo ndingaza xa kukho iingxaki.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Deyme